अष्ट्रेलियामा भेटियो वनमन्त्रीको पासपोर्ट, बाहक अझै गा,यब – Purba Aawaj
अष्ट्रेलियामा भेटियो वनमन्त्रीको पासपोर्ट, बाहक अझै गा,यब
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०४, २०७८ समय: १९:११:३४
केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका नारदमुनि रानाको नाममा रहेको रातो पासपोर्ट अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा फे’ला परेको छ । तर, उनको पासपोर्टमा यात्रा गरेका व्यक्ति भने अझैसम्म गु’म’नाम छन् । ती व्यक्ति १० वर्षअघि अष्ट्रेलिया पुगेपछि गु’म’नाम बनेका हुन्
विशेष स्रोतले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको मन्त्री रानाको १० वर्षअघिको कू’ट’नी’तिक पासपोर्टमा जन्म मिति १९७२ जुलाई १७ लेखिएको छ । पासपोर्ट नम्बर ०२१२४४ रहेको छ । तत्कालीन सभासद रानाको उक्त कू’ट’नी’तिक राहदानीको म्याद एक वर्षे रहेको थियो । सन् २०१० सेप्टेम्बर १९ मा बनेको पासपोर्टको म्याद २०११ सेप्टेम्बर १८ मा सकिएको थियो ।
त¥त्कालीन सभासद रानाले निकालेको कू’टनी’तिक राहदानीमा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ आफ्नो फोटो टाँसेर अष्ट्रेलिया पसेको प्र’ह’री’को अ’नु’स’न्धा’नबाट पुष्टि भएको छ । अष्ट्रेलिया पुगेपछि रानाका नामको पासपोर्ट फ्यालेर बानियाँ श’र’णा’र्थीका रुपमा बसेको र अहिले पीआरसमेत पाइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
रानाका नामको पासपोर्टमा रहेको तस्वीर बानियाँकै रहेको प्र’ह’री स्रोतको भनाइ छ । उनलाई प्र’ह’रीले ११ वर्षदेखि खोजिरहेको छ । मानव त’स्क’रले नेताहरूबाट कू’ट’नी’तिक पासपोर्ट किनेर बेचेको र उनीहरु अस्ट्रेलिया र क्यानडातर्फ गएको प्र’हरी’को त्यसबेलाको अ’नुस’न्धानले देखाएको थियो । यो विषयमा अ’ख्ति’यारमा समेत मु’द्दा परेको थियो । राहदानी दु’रु’पयोगमा ११ जनावि’रु’द्ध मु’द्दा चलेको थियो
गो’पनीयतासम्बन्धी का’नून निकै क’डा रहेको अस्ट्रेलियामा यात्रा गरेका व्यक्तिको बारेमा थप जानकारी लिन सम्भव नभएको भन्दै नेपालको सु’रक्षा स्रोतले ती व्यक्ति अस्ट्रेलियामा अर्कै नाम र पहिचानसहित स्थापित भैसकेको हुन सक्ने बतायो .
सन् २०१० ताका नेपालमा ज्यान जो’खि’ममा परेको भन्दै श’रणार्थीका रुपमा कतिपय मानिसहरु अष्ट्रेलिया र युरोपमा देशहरुमा जाने गरेका थिए । रानाको राहदानी किनेका व्यक्ति पनि मानव त’स्क’रको सहयोगमा अस्ट्रेलिया आउन सफल भएको स्रोतले बतायो ।
मानव त’स्क’रले रानालगायत अन्य सांसदहरुको पनि कू’ट’नीतिक पासपोर्ट किनेर बेचेको र विभिन्न व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया तथा क्यानडा पठाएको अ’नुस’न्धानबाट देखिएको छ । नारदमुनि रानाजस्तै तत्कालीन सांसद शिव पुजन राय यादवको पनि रातो पासपोर्ट अष्ट्रेलियामै फे’ला परेको छ ।
यादवको पासपोर्टमा जन्म मिति १९७० अगस्त २६ र पासपोर्ट नम्बर ०२०४४५ उल्लेख छ । यो पासपोर्ट पनि एक वर्षका लागि जारी भएको थियो । यादवको पासपोर्टमा म्याग्दीकै केदार पौडेल नक्कली सभासद बनेर अष्ट्रेलिया पसेका हुन् । पौडेल पनि अहिलेसम्म गायव छन् ।
अस्ट्रेलियामा विगत दुई दशकदेखि का’नू’न व्यवसाय गर्दै आएका प्रथम नेपाली का’नू’न व्यवसायी डा. शमशेर सिंह थापाले विगतमा नेपालका नेताहरुले रातो पासपोर्ट बनाएर बेच्ने गरेको खबर सत्य भएको बताए । उनले भने, खोजी गर्ने हो भने एक/दुई होइन, दर्जनौ र सयौं त्यस्ता घ’ट’नाहरु भेटिन सक्छन् ।
त¥त्कालीन सभासद राना र यादवको पासपोर्टमा फोटो टाँसेर दुई व्यक्तिहरु अष्ट्रेलिया पस्न सफल भए पनि त¥त्कालीन सभासद वीपी यादव र गायत्री साहको पासपोर्टमा अष्ट्रेलिया हिँडेका दुई व्यत्तिहरु भने अबुधाबी विमानस्थल बाटै नेपाल फर्काइएका थिए ।
रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको अ’भि’यो’गमा नारदमुनि राना र अन्य सभासद वि’रु’द्ध रानावि’रु’द्ध अ’ख्ति’यार र प्र’ह’रीको केन्द्रीय अ’नु’स’न्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बेग्लाबेग्लै अ’नु’स’न्धान गरेका थिए । यसक्रममा रानालाई प्र’ह’री’ले प’क्रा’उस’मेत गरेको थियो । पछि उनलाई विशेष अ’दा’ल’त’ले सफाइ दिएको थियो।स्रोत रातोपाटि
Last Updated on: June 18th, 2021 at 7:16 pm